Disposable Razor, Double Edge Razor, 3 Nereza Disposable Razor - Jiali
Kusanganisira mareza kubva kune rimwe blade kusvika kune matanhatu blade uye ese ari maviri anowanikwa kune anokwanisa kuraswa uye system reza.
Yakawedzera hupamhi hunyoro bhaa ine Vitamin E uye Aloe Vera. Yakareba uye gobvu mubato inopa kwakanakisa kutonga uye kunyaradza.
Yakagadzirwa muhutsanana nharaunda. Special yakagadzirirwa muzinga wekubvisa bvudzi nyore. Ose magezi ane FDA akasimbiswa.
Kaviri Edge Nereza
Yakagadzirwa kubva kuSweden isina tsvina. European yekukuya uye yekumhanyisa tekinoroji inovimbisa kupinza uye kugadzikana.
Chinjwa Head Disposable Men Disposable Zvichienderana ...
Soft mubato matatu chisvo classical patani varume di ...
Super Premium Washable Disposables Shanu Vhura Ba ...
Nhanhatu Yakavhurika Back Nereza Nereza Mens system Razor Sha ...
High yepamusoro chengetedzo Stainless simbi katatu chipande ...
Economic refu mubato Disposable Triple Nereza Wo ...
Personal Care Stainless Steel Vakadzi Disposable ...
Diki saizi yemukadzi reza mune yakanaka epurasitiki bhokisi ye ...
Rudzi Rwatinotumira Kunze
Gore reJiali Rakamisikidzwa
Chigadzirwa Kutengesa Vhoriyamu
Ko rako reza riri kuita sei?
Ningbo Jiali inyanzvi reza kugadzira ine makore makumi maviri nenhoroondo. Ese blade zvinhu uye tekinoroji zvinobva kuEurope. Mavezi edu anopa ruzivo rwakanaka kwazvo uye runogara kwenguva refu.
Vatengi vanogara vachibhadhara zvakanyanya kuzita rezita pachinzvimbo chebasa rezai. Dzedu shave pamwe chete nemavara asi nemutengo wakaderera. Icho chisarudzo chakanaka kwauri.
Tine hushoma huwandu hwehuwandu hunodiwa kune mazhinji maodha asi zvakare ticha tarisa yako chaiyo musika mamiriro kuve anotsigira. Kubatsirana kunogara kuri iko kwekutanga.
Ndapota siyai mameseji uye isu tichava nekutaurirana mukati me24hours.